2019 Nandeha tamim-pahombiazana ny Depond tamin'ny fisafoana GMP Etiopia
Nanomboka ny 21 ka hatramin'ny 23 Oktobra 2019 dia nanaiky ny fanekena sy ny fankatoavan'ny Ministeran'ny fambolena any Etiopia i Hebei Depond. Ny ekipa mpanara-maso dia nandalo ny fisavana ny tranokala telo andro sy ny famerenana ny antontan-taratasy, ary nino fa i Hebei Depond dia nahafeno ny fepetra takian'ny fitantanana WHO-GMP an'ny minisiteran'ny agricu ...
Nanomboka ny 19 ka hatramin'ny 20 oktobra 2019 dia nanatanteraka valan-jaza 5 taona ny dokotera valan-jaza GMP tany Depond, Provincia Hebei, ny fandraisan'anjaran'ny mpitsabo sy ny manam-pahefana ary manam-pahaizana momba ny faritany sy ny distrika. Nandritra ny fihaonana fiarahabana Andriamatoa Ye Chao, gen ...
Ny 18 mey 2019 no nosokafana ny 17-taona (2019) China Animal Husbandry Expo ary 2019 ny International International Hus Husryry Expo ao Wuhan International Expo Center. Miaraka amin'ny tanjona sy iraka fanavaozana no mitarika ny fampandrosoana ny indostria, hampiseho sy hampiroborobo ny lat ...
Nanomboka ny 15 ka hatramin'ny 19 desambra 2019 dia nanaiky ny fanekena sy ny fankatoavan'ny Ministeran'ny fambolena any Sudan i Hebei Depond. Ny ekipa mpanara-maso dia nandany ny efatra andro teo amin'ny fisafoana sy ny fizahana ny antontan-tranonkala, ary nino fa i Hebei Depond dia nahafeno ny fepetra takian'ny fitantanana WHO-GMP an'ny minisiteran'ny agricultur ...
Nihemotra tamin'ny taona 2019 Russia International Animal Husbandry Expo
Tamin'ny 28-30 Mey 2019, dia notanterahina tany Moskoa, Rosia, ny fampirantiana biby iraisam-pirenena, tao amin'ny Mosko, Russia, ny fampandrenesana dia nahomby tamim-pahombiazana tao amin'ny Ivotoerana Iraisam-pirenena krokus iraisam-pirenena sy fampirantiana. Naharitra telo andro ilay fampirantiana. Mpanotrona maherin'ny 300 ary mpivarotra 6000 no nanatrika ny exh ...
Depond amin'ny taona 2019 Thailand VIV Asia - Bangkok
Hatramin'ny taona 1991 dia notazonina indray mandeha isaky ny roa taona ny VIV Asia. Amin'izao fotoana izao dia efa 17 ny lanonany. Ny fampirantiana dia mirakotra ny alàlan'ny kisoa, ny akoho, ny omby, ny vokatra akia ary ny karazana biby fiompy, ny teknolojia ary ny serivisy amin'ny lafiny rehetra amin'ny rojotra indostrialy manomboka amin'ny "feed to food", manangona le ...
Nihemotra tamin'ny taona 2019 Bangladesh International Animal Husbandry Expo
Tamin'ny 7-9 martsa lasa teo dia nandray anjara tamin'ny hetsika iraisam-pirenena ho an'ny vorona an'habakabaka iraisam-pirenena tao Bangladesh i Bhei Depond tamin'ny taona 7-9, izay fahombiazana lehibe ary nahatratrarana be. Bangladesh dia iray amin'ireo tsenan'ny fanondranana sy harena be indrindra amin'ny taona vitsivitsy lasa izay. Ho fanatsarana ny fifaninanana amin'ny agricu ...
Nanomboka ny 17 ka hatramin'ny 19 septambra lasa teo, ny fampirantiana biby fiompy biby fiompy biby fiompy VIV 2018 any China dia natao tany Nanjing, renivohitr'i Sina taloha. Raha ny rivotra manindry ny indostrian'ny fiompiana biby sy ny toerana fivorian'ireo mpanao asa soa, maherin'ny 500 dia fampirantiana an-trano sy vahiny no ...
2018 Depond in 16th International International Husbandry Expo-Chongqing
Ny 18 Mey, ny faha-16 (2018) any Sina Animal Husbandry Expo dia nosokafana be tao amin'ny Chongqing International Expo Center. Naharitra telo andro ilay fampisehoana manontolo. Tao amin'ny faritra fampirantiana 200000 metatra toradroa, orinasa lehibe an-trano sy vahiny no mivory eto. Nandritra ny biby Husbandr ...
Nandeha soa aman-tsara ny fandalinana an'i Libya GMP inspection tamin'ny taona 2018
Nanomboka ny 24 ka hatramin'ny 26 martsa 2018 dia nanaiky ny fisafoana ny minisiteran'ny fambolena any Libya i Hebei Depond. Ny ekipa mpanara-maso dia nandalo ny fizahana ny fizahana telo andro an-toerana sy ny famerenana ny antontan-taratasy, ary nino fa ny Hebei Depond dia mahafeno ny fepetra takian'ny WHO-GMP, ary manome tombana ny Hebei Depond. Ity ...
2018 mihemotra amin'ny fampiratiana iraisam-pirenena Kazakhstan faha-14-Astana
Fampirantiana iraisam-pirenena Kazakhstan dia napetraky ny orinasa TNT International Exhibition Company any Etazonia ary natao tamim-pahombiazana in-13. Nandritra ny fampirantiana fanao isan-taona, nanao fampiasa amin'ny milina fambolena, agrochemical ary fiompiana biby ny mpanao fampirantiana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ...
2017 Depond ao amin'ny laharana faha-6 Pakistan iraisam-pirenena Husbandry Expo-Lahore
Nanomboka ny 24 ka hatramin'ny 26 aogositra 2017 dia nisy ny fampirantiana momba ny biby fiompy biby iraisam-pirenena Pakistaney faha-6 tao Lahore. Hebei Depond dia nanao endrika tsara tarehy tao amin'ny Expo akoho Pakistan, nandritra ny fotoana nifampiresahana tamin'ny vaovao tany an-toerana. Hebei Depond, amin'ny fiompiana biby sinoa sy orinasa fivarotam-panafody, w ...